GSM ဖုန်းများ ငွေဖြည့်ကဒ် ထည့်သွင်းရာတွင် ဖြစ်တက်သော Error များ – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Wed, Mar 14th, 2012 Uncategorized | By ငွေစင်ကြယ်(မြင်းခြံ) GSM ဖုန်းများ ငွေဖြည့်ကဒ် ထည့်သွင်းရာတွင် ဖြစ်တက်သော Error များ
Tags Share GSM အသုံးပြုသော GSM mobile User…များအတွက်ဖြစ်တက်သော… ဖြစ်နေသော ….ပြသာနာလေးတွေပါ… အခုရက်ပိုင်းတွင် GSM ဖုန်းများသို့ငွေကဒ်ဖြည့်သွင်းရာတွင်….ငွေအပြည့်မရောက်ဘဲ…အနည်းငယ်သော်လည်းကောင်း…
တ၀က်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်တက်ပါတယ်…ဒီနေ့ကျွန်တော် ငွေကဒ်ဖြည့်ပေးရာတွင် ထို ပြသနာ မျိုး ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေခဲ့ရတယ်ဗျာ…ငွေကဒ် တစ်သောင်းဖြည့်သွင်းရာတွင်…တစ်သောင်းမ၀င်ဘဲ 8160 ကျပ်ဘဲ ၀င်သွားတယ်ဗျာ..Customer ကလဲ ဗျာ…တစ်သောင်းမ၀င်တော့ ကျွန်တော်ကို ပြသနာရှာရော…အဲဒီမှာ ချွေးတွေဘာတွေပြန်သွားတယ်….ဆက်သွယ်ရေးရုံးကိုဖုန်းဆက်တော့လဲ ဖုန်းက မအားဘူး…တော်တော်ရှင်းလိုက်ရတယ်…ခနနေတော့ နောက်ထပ် GSM ဖုန်းကို ငွေကဒ်ဖြည့်ရာမှာ တစ်သောင်းမ၀င်ဘဲ 4000 ကျပ်ဘဲ ၀င်တယ်ဗျာ..
တကယ်လို့ များ Myanmarmobileapp ရဲ့ ဖုန်းပိုင်ရှင်များ …. အခုလို ပြသနာများကြုံတွေ့ လာခဲ့ရင်…မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးသို့ ဖုန်းဆက်ပြီးပြောကြားနိူင်ပါတယ်…နောက်ပြီးတော့ Call Center ဖုန်းနံပါတ် 1876 သို့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ လဲ ပြောကြားနိူင်ပါတယ်လို့ အသိပေးအပ်ပါတယ်ဗျာ….အခုလို ပြသနာ မျိုးတွေလဲ ရှိသလို ကျွန်တော် ညီငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ GSM ဖုန်းက ဖုန်းဆက်တယ်တဲ့…မိနစ် 20 ကျော် ကြာတယ်တဲ့…phone bill လုံးဝ မဖြတ်ဘူးတဲ့ဗျ….အဲဒီလိုမျိုးတွေလဲ ဖြစ်တက်ပါတယ်…. Bill မဖြတ်ရင်တော့ သဘောကျတာပေါ့ဗျာ.. တစ်ချို့ ကျတော့လဲ phone က Miss Call ၀င်သွားရုံနဲ့Bill ဖြတ်တက်ပါတယ်….ဒါမလို့မိမိတို့ ရဲ့Phone Bill များ သေချာ စိစစ်ကြပါရန်…အသိပေးအပ်ပါတယ်… About the Author
ငွေစင်ကြယ်(မြင်းခြံ) - Related News